संसद बैठकमा प्रयोग गरेको कन्डम भेटिए पछि !!! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /रोचक/संसद बैठकमा प्रयोग गरेको कन्डम भेटिए पछि !!!
संसद बैठकमा प्रयोग गरेको कन्डम भेटिए पछि !!!
एजेन्सी- नेपाली संसदमापनि कहिलेकाही हंगामा हुने गरेको छ । कहिले कुर्सी तोड्ने, कहिले हानाहान गर्ने त विश्वका अधिकांश संसद हलमा भइरहेका कार्य हुन् । त्यो मध्यपनि स्क्याण्डल नै स्क्याण्डलले भरिएको बेलायती संसद त झनै कुरै नगरौँ । अहिले फेरी बेलायती संसदबाट यो पटक एउटा अच्चमको समाचार बाहिर आएको छ । सन्डे टाइम्सका अनुसार सांसदहरु प्रयोग भएको कन्डम बोकेर आउने गरेको खुल्न आएको छ । यो खुलासा उक्त कार्यालयमा सरसफाईको काम गर्ने कामदारहरुले गरेका हुन ।
उनिहरुका अनुसार ब्रिटेन संसदमा सासंसदहरुले प्रयोग गरिएको कन्डम बोकेर आउँने गरेको आरोप लगाएका हुन । उनिहरुका अनुसार संसदमा जथाभावि फोहोर गरेको बान्ता गरेका साथैं प्रयोग भएको कन्डम फालिएको भन्ने आरोप लगाएका छन । पश्चिमा देशहरुमा यौन सामान्य भएपनि संसद भवनभित्र यस्तो हुनुले देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउँने कुरामा त्यहाँमा मानिसहरु विश्वास गर्दछन । सफा गर्ने कामदारहरूले आरोप लगाएका छन् कि बेलायतमा सांसदहरूले आफ्नो कार्यस्थल बर्बाद गर्दैछन्।
टाइम्स पत्रिकाको प्रतिवेदन अनुसार, सांसदहरूले उनीहरूको व्यवहारको कारण नयाँ कडा नियमहरूको सामना गर्न सक्छन्। कमन्स अधिकारीहरुले संसदको उचित प्रयोग गर्न एक सेवा सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन । गार्जियन द्वारा जारी एक रिपोर्ट अनुसार सांसदहरु को यस्तो निच व्यवहार थाहाँ पाउँदा संसद छक्क थियो ।सफाई कम्पनीको एक कर्मचारीका अनुसार गत वर्ष वेस्टमिनिस्टर सेक्स कान्ड पनि एकदमैं चर्चित कान्ड हो । सामाजिक संघले संसद को प्रबन्धक संग छलफल गरेको थियो कि एक सांसद संग शारीरिक सम्पर्क गर्न तिनीहरूलाई जिस्क्याउने गर्ने गरेको गुनासो आएको थियो ।
उनले मुद्धा दर्ता गरे कि एक सांसद उनको पछि लागे र उनको शरीर छेड़छाड गरे। यो खुलासे संघ बन्द थियो र नयाँ व्यवस्थापन गर्न भन्दा हस्तान्तरण पछिको यो घटना हो । यसबाहेक, धेरै जना अभियोगहरू यौन दुर्व्यवहारको लागि बेलायती संसदमा भएको बयान दिएका थिए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रक्षा सचिव सर माइकल फोलन, जसले पहिले महिलालाई यौन दुव्र्यवहार स्वीकार गरेपछि संसद छोडेका थिए। फलोन सहयोगी डेमियन ग्रीन समय को आफ्नैं सहयात्रीको कम्प्युटरमा पाइने अश्लील सामाग्रीको बारेमा झूट बयान दिएका थिए ।
कोरियाले बनायो भोक लाग्दा खान मिल्ने कपडा
किन मन पराउँछन् युवतीहरु भण्टा ? यस्तो छ कारण (भिडियो सहित)
भिडमा युवती नाङ्गै थिइन्, तैपनि कसैले पत्ता लगाउनै सकेन, यस्तो छ कारण !!!
हरेक महिलाले आफ्नो श्रीमानसँग यी ४ कुरा जहिल्यै लुकाउँछन् ,ज्यान गएपनि भन्दैनन् जुन कुरा यस्तो छ !